Semalt: Ireo mpitsidika trotraka sy ny fomba hiarahana amin'izy ireo?
Ny mpampiasa webmasters dia mampiasa ny Google Analytics amin'ny fanaraha-maso ny mpitsidika ny tranonkala. Ivan Konovalov, Semalt Mpitantana Success Successor, dia milaza fa raha hitanao fa misy tsikera mitsidika ao amin'ny kaontinao Google Analytics, dia ny sombintsombiny dia ilay fitsidihana spam hitanao ny tranonkala. Ny vohikala vaovao sy ny bilaogy dia mahazo 50 ka hatramin'ny 100 isam-bolana isan'andro, ary raha toa ka mampiseho fitsidihana mihoatra ny 200 ao anatin'ny andro maromaro raha tsy misy SEO marina, dia tokony hahafantatra ny olana ianao ary hiezaka ny hahita ny vahaolana.
Ny eritreritrao voalohany dia "ny fitohizako dia miakatra tsikelikely." Rehefa mamaky ireo tarehimarika ireo ianao dia hahita fa ny spam referrer dia mamorona fako ho an'ny tranokalanao mangina.
Avy aiza ny mpitsidika?
Ny ankamaroan'ny tranokala sy ny bilaogy dia mahazo fitsapana avy amin'ny fikarohanam-bokatra sy ny tranonkala media sosialy. Ny sasany amin'ireo webmasters dia misafidy ireo referrals, ary ny rohy amin'ireo tranonkala voalaza dia azo jerena ao amin'ny kaontinao ao amin'ny kaonty Google Analytics. Raha mijery tsara ianao, dia ho fantatrao fa mitohy isan'andro ny referrals ary ny fampitomboana dia tsy tsara ho an'ny tranokalanao. Ny rohy avy amin'ny tranonkala mendrika na olon-dehibe dia marika fa atahorana ny tranonkala. Ho an'ny sasany, fanavaozana goavana dia zavatra tsara, saingy tsy marina izany.
Iza no mifandray amin'ny tranokalako?
Mandehana any amin'ny fizarana referrals mba hahafantarana ny isan'ireo tranonkala izay nandefa anao fifamoivoizana an-tsoratra nandritra ny andro maro. Azonao atao ny mahita ny free-social-buttons.com, darodar.com, 4webmasters.org, ary sanjosestartups.com eto amin'ity faritra ity. Raha Google ianao amin'ireny tranonkala ireny, dia ho hitanao fa izy ireo dia miverimberina amin'ny mpitsikilo ary tsy mandefa ny fifamoivoizana sandoka saika isan'andro. Midika izany fa ny fifamoivoizana avy amin'ireny tranonkalan'ny fitsangatsanganana ireny dia tsy inona fa fanaintainana ho anao.
Ny spam referrer dia ny fangatahana sandoka nalefa amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny sora-baventy izay manapotika ny HTTP anao. Ny HTTP referrer dia sombin-tserasera atolotry ny navigateur rehefa miala amin'ny tranokala iray mankany amin'ny iray hafa. Ireo karazam-pangorahana dia hametraka ny HTTP anao amin'ny tranonkala spam izay tadiavin'izy ireo hampiroborobo ny aterineto. Raha toa ianao miahiahy momba ny isan'ireo fitsapana azonao avy amin'ny tranonkalanao na ireo tsindry amin'ireo rohy ireo, dia tsy tokony hitsidika ny tranokalany mihitsy ianao.
Nahoana no mampidi-doza ny manoratra spam?
Ny vohikala sasany dia mamoaka ny logs referrer ary mifantoka amin'ny lainga hafa ho an'ireo spammers. Rehefa avoaka amin'ny aterineto ny angon-drakitra, dia azon'ireo spamers ny fitetezana ny tranonkalany. Tahaka ny hoe ny motera fikarohana dia mikaroka mora foana ny tranonkalany na ny bilaogy, amin'ny fijerena azy ara-drariny. Mampidi-doza ny spam referrer noho ireto antony ireto:
Mety hanongana ny kaonty Google Analytics izany, ary mitsahatra ny isan'ny fitsidihana
Tsy ho vitantsika ny hanamarina ny isan'ny mpitsidika tena nananantsika teo amin'ny tranokalantsika;
Mampitombo ny taham-pitenenana ho 100% izany, ary ny faharetan'ny fivoriana dia foana 0:00:00;
Ny Google sy ny fitaovan'ny fikarohana hafa dia mahafantatra ireo zavatra ireo ary mety handrodana ny toerana misy anao ao anatin'ny andro vitsivitsy. Izany no mahatonga ireo fitsidihana spam fitsidihana somary hafikira ho an'ny webmasters. Tokony handray fepetra henjana amin'ireo tranonkala mampiahiahy ianao dieny mbola tsy tara loatra ary ny orinasanao dia rava amin'ny aterineto Source .